Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. १८ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा : २४३ वटा पुल निर्माण, ९१५ किमि सडक स्तरोन्नति – Emountain TV
१८ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा : २४३ वटा पुल निर्माण, ९१५ किमि सडक स्तरोन्नति
काठमाडौं, २७ असार । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले गरेका कामका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका सचिवले प्रधानमन्त्री समक्ष समीक्षा प्रस्तुत गरेका छन् । ६ घण्टा लामो समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै छन् । कार्यक्रममा १८ वटा मन्त्रालयका सचिवले आ–आफ्नो वार्षिक समीक्षा पेस गरेका थिए ।
बथनाहा–विराटनगर १८ किलोमिटरमध्य १० किलोमिटर सञ्चालनका लागि तयार भएको छ । रक्सौल–काठमाडौं (१३५ किमि) र काठमाडांै– रसुवागढी (७२ किमि) रेल मार्ग निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य १ सय प्रतिशत सम्पन्न भइ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्य हालसम्म ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मार्गाधिकारभित्र परेका रूख कटान कार्य हालसम्म ९७ प्रतिशत सम्पन्न भएको समीक्षामा उल्लेख छ । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।